musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » France inozivisa seti nyowani yeCOVID-19 zvirambidzo
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Gurukota rezvehutano reFrance, Olivier Veran
Kutanga kubva svondo rino, masiki achazove, zvakare, anosungirwa munzvimbo dzese dzemukati muFrance uye, panguva yezororo, pamisika yekunze yeKisimusi.
Gurukota rezvehutano reFrance, Olivier Veran, nhasi yakazivisa seti nyowani yepasirese anti-coronavirus zvirambidzo zvakagadzirirwa kurwisa yechishanu wave yeCOVID-19.
Sekureva kwegurukota, matanho matsva, anosanganisira kudiwa kwemasks enzvimbo dzemukati uye kuraira vanhu vakuru vese kuti vatore pfuti yekuwedzera hutano hwavo, chimwe chikamu chekuyedza kudzivirira spike muCOVID-19 muzvipatara uye kuuraya pasina kudzosera France kumashure. kupinda mulockdown.
Kutanga kubva Mugovera, Mbudzi 27, vese vakuru mu Furanzi vachakodzera kupfurwa neCCIDID-19 vaccine booster, zvichidikanwa kusvika Ndira 15 kuti vaone kuti hutano hwavo hunoramba huchishanda.
Vanhu vanopfuura makumi matanhatu neshanu vakatoudzwa kuti vatore mushonga wavo wechitatu weCCIDID-65 kupfurwa naZvita 19.
Sezvazvakamira, hutano hunopfuura hunodiwa mhiri Furanzi kuwana nzvimbo dzemukati, dzakadai seresitorendi nemabhawa.
chikonzero akawedzera kuti hurumende haichagamuchire bvunzo dzisina kunaka dzakatorwa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri ekusvika seimwe nzira yeCOVID pass. Pane kudaro, iyo yakaipa COVID bvunzo ichada kunge yatorwa mukati memaawa makumi maviri nemana ekupinda.
Zvisinei nematanho matsva aya, Gurukota rezvedzidzo, Jean-Michel Blanquer, akatonga kuti zvikoro zvivharwe kana vasangana neCCIDID-19, vachiti panzvimbo pacho vadzidzi vanongodiwa kuti vaongororwe.
Furanzi yaona nyaya dzeCCIDID-19 dzichiwedzera mumavhiki apfuura, paine 32,591 hutachiona hutsva hwakanyorwa neChitatu.
Kunyangwe 76.9% yehuwandu hweFrance vachibaiwa zvizere kurwisa COVID-19, huwandu hwenyika hwasvika hunosvika mazana maviri ehutachiona hutsva pamunhu zana.